मुसाले नै विरालोलाई लखेट्यो ! [भिडियोसहित] - Everest Dainik - News from Nepal
मुसाले नै विरालोलाई लखेट्यो ! [भिडियोसहित]
एजेन्सी । मुसालाई बिरालाले लखेट्नु त सामान्य घटना नै हो । लखेटीलखेटी बिरालोले मुसालाई आफ्नो सिकार बनाउँछ । तर के मुसाले बिरालो लखेटेको देख्नुभएको छ ?
हो यस्तै एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ । युरोपेली देश लक्जमबर्गमा मोबाइलबाट खिचिएको एउटा भिडियोमा सडकमा मुसा देखेपछि बिरालो नजिकै जान्छ ।
याे पनि पढ्नुस बिरालो मार्नेलाई २ वर्ष जेल सजाय !
मुसाले आफ्नो नजिकै आएको बिरालोलाई लखेट्न थाल्छ । बिरालो बिस्तारै बिस्तारै भाग्न थाल्छ । आफ्नो सिकार गर्न आएको बिरालोलाई मुसाले लखेट्यो ।
ट्याग्स: Cat, Rate